ခ က် ဦး – ငို တဲ့ လ | MoeMaKa Burmese News & Media
ခ က် ဦး – ငို တဲ့ လ
နှစ်တိုင်းနင့်အောင် ငိုရတယ် ။
၅ . ၇ . ၂၀၁၅